पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
शुक्रबार, ९ फागुन, २०७६
शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छन् । पिसाब पोल्नु र पिसाब गर्दा पीडा हुनु जस्ता समस्याले अन्य धेरै रोगको संकेत गर्छ । पिसाब पोल्ने समस्या भएमा मुत्राशयमा पीडा हुने, पिसाब दुर्गन्धित हुने, पिसाबको रङ गाढा, पहेँलो हुने, थोरै–थोरै पिसाब धेरै पटक–पटक आउने जस्ता समस्या हुने गर्छन् ।
पुरुषको तुलनामा महिलामा पिसाब पोल्ने समस्या बढी हुन्छ । पाठेघरको मुख र मुत्रनली जस्ता अंग एउटै ठाउँमा हुने भएकाले संक्रमण छिट्टै फैलिन्छ ।
– सामान्यतया शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा पिसाब पोल्छ । जस्तै गर्मीयाममा शरीरबाट पानी अन्य माध्यमबाट पनि बाहिर जान्छन् । यसले गर्दा शरीरबाट बिषाक्त बस्तु बाहिर ल्याउन प्रसस्त पानी चाहिन्छ ।
– विभिन्न संक्रमणका कारण पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुनसक्छ । पिसाब थैलीमा पत्थरी हुनु पिसाब पोल्नुको मुख्य कारण हो । त्यस्तै, मृगौलामा पत्थरी, मधुमेह, मेरुदन्डमा चोट र कलेजोसम्बन्धी समस्या हुँदा पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ ।
– कतिपय अवस्थामा शरीरबाट पिसाब पूर्ण रुपमा बाहिर नआउँदा समेत पिसाब पोल्ने गर्छ । विभिन्न कारणले पिसाब लागे पनि त्यसले पूर्णता पाउँदैन । पिसाबथैलीमा मासु पलाएमा पनि पिसाब पोल्ने वा दुख्ने हुन्छ ।
– शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिनुहुँदैन । यदि कुनै रोगका कारण पिसाब पोल्ने समस्या भएको हो भने सम्बन्धित रोगको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– पिसाब पोल्ने समस्या कुनै जटिल रोगको लक्षण हुनसक्ने भएकाले समयमै उपचार गर्नुपर्छ । यन्याथा पिसाब पोल्ने समस्या पछि गएर जटिल रोग बन्न सक्छ ।
अभिषेककी दिदीलाई ऐश्वर्याका यी बानीहरु कत्ति मन पर्दैन
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय र अभिनेता अभिषेक बच्चन बिबाह बन्धनमा बाँधिएको पनि १० भन्दा बढी भइरहेको छ । यी दुई बीच बच्चा पनि भइसकेको छ । तर, कहिलेकाँही खटपट पर्ने गरेको समाचार पनि बाहिरिने ग
बाल्यकालमा जब आमिर खानलाई यस्तो स्कुलमा पठाइयो
एजेन्सी । आमिर बच्चादेखि नै लजालु स्वाभावका थिए । छिमेकीका बालबालिकासंग समेत खासै घुलमिल हुदैन्थे । उनलाई सानोमा केटीको स्कुलमा पठाइएको थियो । त्यसैले आमिर केटाभन्दा केटी साथीसँग बढी घुलमिल हुन्थे ।
हरेक दिन एउटा अण्डा खानुहोस् !
एजेन्सी । एक अध्ययनका अनुसार हरेक दिन एउटा अण्डा खाँदा कुपोषित बच्चाहरुको पनि सामान्य उचाई बढ्न सक्ने र उनीहरुको शारिरीक विकासमा मद्दत पुग्ने तथ्य बाहिर आएको छ । उसिनेको वा पकाएको अण्डा खानाले यसप्रका
एजेन्सी । एक अध्ययनका अनुसार हरेक दिन एउटा अण्डा खाँदा कुपोषित बच्चाहरुको पनि सामान्य उचाई बढ्न सक्ने र उनीहरुको शारिरीक विकासमा मद्दत पुग्ने तथ्य बाहिर आएको छ । उसिनेको वा पकाएको अण्डा खानाले यसप्रकारको फाइदा हुने उक्त अध्ययनले जनाएको छ ।
आखिर धेरै बच्चाहरु किन रातमा धेरै रुन्छन् !